Interaction Google Earth oo leh Microstation - Geofumadas
Google Earth isdhexgalka Microstation
Mee, 2008 Google Earth / Maps, Microstation-Bentley
In Microstation V8 lahaa qalabka qaarkood Qalabyada dhulka oo la macaamilaya Google Earth, inkastoo ay si gooni gooni ah u buuxiyeen. In version XM waxay kudhexgalaan Bentley Map (horay ahaan Geographics) waxayna ku hawlgalaan "qalab / google Earth"
Aynu aragnay waxa ay u adeegaan:
Marka hore, kan ugu horreeya.
Waxaad u baahan tahay inuu ku soo bilowdo howsha map qiyaas, haddii aan u meel kasta ku dhici doona (taas oo ka dhigaysa Bentley Map oo kaliya, ma Microstation caadiga ah XM).
Si loo qoondeeyo saadaasha waxaa la sameeyaa:
"nidaamka goobaha / isku xirka"
"Master / edit"
kiiskayga waxaan dooran doonaa UTM WGS84, Zone 16
markaa "master / save"
Soo dhoofinta kmz / kml. Astaanta koowaad waa in la dhoofiyo feylka gawaarida
Iibinta muuqaalka Google Earth. icon labaad waa in aad nuqulka image ka Google Earth, oo keliya 3D file abuur ka shaqeeya, laakiin aad u sahlan, sababtoo ah waxaad keeni Microstation qabsado iyo dooran darafyadiisa image aad loo dhoofiyo iyo sida aad leedahay image georeferenced (badan ama ka yar ).
Samee jilayaasha dhibicda Google Earth. Tani waxay u adeegtaa ...
Isku duwo Google Earth. Taas waxa loo sameeyaa iyada oo soo socda laba badhamada, marka hore waxaa uu sababaa Google Earth in ay diiradda saaraan aragtida aad leedahay on map-ka, anfacaya for qabsaday ee image ka dibna georeferenciarla; soo socda waa in la sameeyo guuldaradoodii, keeni view map in ay muujiyaan in ay tahay Google ah.
Deji guryaha. Tani, guddi ayaa loo soo bandhigaa si loo habeeyo nooca Google Earth waxaan rabnaa in aan dhoofino (3 ama 4), sidoo kale daahfurnaan, haddii aan rabno inaanu soo dirno oo keliya heerarka muuqda, taas oo bedeleysa hababka xariijinta iyo haddii aan rabno inaan qaadno sawirrada tixraaca.
Waxaa intaa sii dheer fursada in aad isla markiiba furto faylka Google Earth.
Hoos waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dejinta waxqabadka, sare u qaadidda moodooyinka 3D, dhulalka iyo geedo kale.
Karinta. Badhanka ugu dambeeya waa in lagu ordo animation oo lagu keydiyay Google Earth ... waxyaalahan waxaan filayaa.
Tani waa khariidadda hore ee Microstation
Tani waa khariidada loo dhoofiyo Google Earth
Post post waxay sharaxayaan sida tan loo sameeyo GIS kala cayncayn ah iyo AutoCAD
Bentley Systems Google Earth KML GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Sida loo baro koorsada Microstation
Post Next Maanta waxaan la ruxruxayNext »